ဗတ္တိဇံ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / Church ကို / အဆိုပါစက္ကမင်မင်္ / ဗတ္တိဇံ
ဗတ္တိဇံကိုခံရဖို့တစျခုဖနျမှေးဖှားဖြစ်ပါတယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ကျေးဇူးတရားသန့်ရှင်းစေသောလက်ခံရရှိရန်, ရာဝိညာဉျရေးရာအသက်တာကိုဘုရားသခငျ၏ဆုကြေးဇူးကို. ယရှေုသညျယုံကွညျခွငျးနှငျ့ဗတ္တိဇံအကြားဆက်သွယ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသ, သူဆုံးမသွန်သင်သည့်အခါ, " ယုံကြည်. ဗတ္တိဇံကိုသောသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဦးမည်; ဒါပေမယ့်မယုံပါဘူးတဲ့သူသူက "အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ် (မာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကိုတွေ့မြင်, 16:16). "အမှန်ဆိုသည်ကား,, အမှန်တကယ်, ငါသည်သင်တို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်,"သူကမိန့်, "တဦးတည်းမွေးသောအမဟုတ်လျှင် ၏ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သည်, သူက "ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်နိုင် (ယောဟန်သည်ကိုကြည့်ပါ 3:5; အလေးပေးဆက်ပြောသည်).
သခင်ယေရှု, အပြစ်မဲ့သော်လည်း, သူ့လူထုဓမ်မအမှု၏အစမှာ Saint John အားဖြင့်ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ရ; မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုတွေ့မြင်, 3:13. မှတ်စု: သူကလုံးလုံး-ဘုရားသခင်နှင့်လုံးလုံးလူကြောင့်သညျယရှေုအပြစ်မဲ့ခဲ့သည်. ဒါဟာယခင်င်, အရေးကြီးသောကြောင်းမဟုတ်အဆုံးစွန်. သူကလုံးလုံး-ဘုရားသခင်ဖြစ်သောကြောင့်သူ၏အကြံအစည်နှင့်လုပ်ရပ်များဖြစ်ခဲ့–အဓိပ်ပါယျအားဖွငျ့တစျခုပွောဆိုနိုင်–ဘုရားသခင့ကဲ့သို့တူညီသော. (သူသညျဘုရားသခငျခဲ့သည်, နောက်ဆုံးတော့။)
ဒါကြောင့်, အဘယ်ကြောင့်သူ၌ဗတ္တိဇံကိုခံရဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်? သူမ, ဒါပေမယ့်မီလန်၏စိန့် Ambrose စတုတ္ထရာစုအတွင်းကရှင်းပြသည်အဖြစ်, "သခင်ဘုရား၌ဗတ္တိဇံခဲ့သည်, ကိုယ်တော်တိုင်စင်ကြယ်စေရသောပေမယ့်ရေကိုစင်ကြယ်စေခြင်းငှါမ, သူတို့အရေသည်ဒါ, အပြစ်မရှိသူသိတော်မူသောခရစ်တော်၏ဇာတိပကတိအားဖြင့်စင်ကြယ်စေ, "ဗတ္တိဇံ၏တန်ခိုးရှိစေခြင်းငှါ (လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအပေါ် Commentary 2:83).
ကောင်းကင်သို့မတက်ကြွမီ, ယရှေုသညျတမန်တော်အားမိမိသတင်းစကားကိုထပ်လောင်း, "သင်တို့ သွား. လူမျိုးတကာတို့ကိုတပည့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ခမည်းတော်, သားတော်, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏နာမ၌သူတို့ကိုဗတ္တိဇံကို, "ငါသည်သင်တို့ကိုမှာထားတော်မူသမျှသောငှာစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါဆုံးမဩဝါဒပေး (မဿဲတွေ့မြင် 28:19-20).
ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့, ပင်တေကုတ္တေမှာ, Saint Peter တစ်လူအစုအဝေးမှစကားပြောဖြစ်ပါတယ်. မိမိအတရားဟောချက်ရဲ့အဆုံးမှာ, မေးမြန်းတော်မူလျှင်ဖြစ်ပါတယ်, "ကျနော်တို့အဘယ်သို့ပြုရမည်?
ပတေရုသပြန်စာများ, "နောင်တရ, နှင့်သင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းအဘို့အယေရှုခရစ်၏နာမ၌သငျတို့အသီးအသီး၌ဗတ္တိဇံကိုခံရ; သငျတို့သညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျော၏ဆုကြေးဇူးကိုခံရကြလိမ့်မည်. ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သောအဘို့အသင်နှင့်သင်၏သားသမီးနှင့်ဝေးနေသောသူအပေါင်းတို့သည်ရန်ဖြစ်ပါသည်, ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ဘုရားသခင် "သူ့ကိုခေါ်တော်မူသောအသီးအသီး (တမန်တော်၏တမန်တော်, 2:38-39).
အဆိုပါခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများအတွက်, ဗတ္တိဇံခရစ်ယာန်အသက်တာဖို့တံခါးပေါက်ခဲ့သည် (တမန်တော်ကိုတွေ့မြင် 8:12, 38; 9:18; 10:48). ဖြည့်စွက်ကာ, တွင် တမန်တော်ဝတ္ထု 8:37, အဲသယောပိအမတ်, စိန့်ဖိလိပ္ပုကနေဝငျကမျြးလက်ခံရရှိဘဲလျက်, ဗတ္တိဇံများအတွက်အလိုဆန္ဒဖော်ပြ. အလားတူပဲ, တမန်တော်ဝတ္ထုအတွက် 16:33, ပေါလုနှင့်သိလကိုဖိလိပ္ပိထောင်မှူးနှင့်သူ၏တစျခုလုံးကိုအိမ်ထောင်စုဗတ္တိဇံပေး၏ "နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ။ " သူ့ကိုယ်ပိုင်ပြောင်းလဲခြင်းပြန်ပြောင်းပြောပြ, ရှင်ပေါလုအာနနိကလညျးခဲ့ကွောငျးအောက်မေ့, "ယခုမှာသင်သည်အဘယ်ကြောင့်စောင့်ဆိုင်းကြဘူး? ထလော့နှင့်ဗတ္တိဇံကိုခံရ, နှင့်သင့်အပြစ်များကိုဆေးကြော, "သူ၏အမည်ပေါ်တွင်တောင်းဆို (တမန်တော်ဝတ္ထု 22:16). ရှင်ပေါလုသည်ခရစ်တော်၏အသင်းတော်ကိုချစ်နှင့်သူမ၏အဘို့ကိုယ်ကိုကိုယ်စွန့် "သောဧဖက်ပြောထားသည်, သူအကြောင်း သူမ၏သန့်ရှင်းစေခြင်း, "ဟုအဆိုပါစကားလုံးနှင့်အတူရေအဝတ်လျှော်နေဖြင့်သူမ၏စင်ကြယ်စေတော်မူပြီးမှ (ဧဖက်မှပေါလု၏ပေးစာ, 5:25-26; အလေးပေးဆက်ပြောသည်). မိမိအခုနှစ် တိတုမှပေးစာ, ပေါလုကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း wrotes "တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း၏ရေချိုးသည်။ "
အစောပိုင်းခရစ်ယာန်သမိုင်းရေးသားခဲ့သောဆရာရေဗတ္တိဇံမှတဆင့်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းအတည်ပြု. အကြောင်းကိုနှစ်တွင် 150, ဥပမာအားဖြင့်, စိန့်ကို Justin ရေအရပ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရဖို့ဖြစ်နှင့်သောသူတို့ "ကိုယူဆောင်နေကြသည်ဟုဆိုသည်, နှင့်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ပြန်လည်မွေးဖွားခဲ့ကြသည့်အတွက်တူညီတဲ့ထုံးစံ၌ပြန်လည်မွေးဖွားနေကြတယ်. ... ခရစ်တော်သည်လည်းဆိုပါတယ်များအတွက်, '' တစျဖနျမှေးဖှားဖြစ်ပါတယ်မရှိလျှင်, သူက '' ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရ (ယောဟန်သည် 3:3)" (ပထမဦးစွာတောင်းပန် 61).
ယခုနှစ်ခန့် 200, လက်ဇန္ဒြီးယား၏စိန့် Clement ရေးသားခဲ့သည်, "ကျနော်တို့ဗတ္တိဇံကိုခံရသောအခါ, ကျွန်တော်ဉာဏ်အလင်းဖြစ်ကြ၏. ဉာဏ်အလင်းဖြစ်ခြင်း, ကျွန်တော်တို့ဟာသားများအဖြစ်မွေးစားနေကြ. သားများအဖြစ်မွေးစား, ကျွန်တော်တို့ဟာစုံလင်နေကြတယ်. စုံလင်ခြင်း, ကျွန်တော်သနေိုငျဖြစ်ကြ. ... ဒါဟာကျနော်တို့အပြစ်များစင်ကြယ်စေသည့်တစ်ဦးအဝတ်လျှော်ဖြစ်ပါတယ် ... " (ကလေးများ၏နည်းပြ 1:6:26:1, 2). အကြောင်းခုနှစ်တွင် 217, ရောမစိန့် Hippolytus အဆိုပါကမ္ဘာကိုခရစ်တော်၏ထွန်း "နှင့်ဗတ္တိဇံအားဖြင့်သူ၏ပေါ်ထွန်းခြင်းပြောဆို, နှင့်လူအပေါင်းတို့ရှေ့၌ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသစ်ကိုမွေးဖွား, နှင့်တုံ၏သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး " (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏အဆုံးအပေါ်ဟောပြောချက် 1). အကြောင်းခုနှစ်တွင် 250, ကားသေ့ချြ၏စိန့် Cyprian ထင်ရှား, "ငါ့အတိတ်အသက်တာ၏အစွန်းအထင်းတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း၏ရေအားဖွငျ့ကွာဆေးကြောခဲ့သည့်အခါ, အထက်ကနေအလင်းကိုငါ့ကင်းလွတ်ခြင်းနှင့်ယခုစင်ကြယ်သောနှလုံးပေါ်မှာသူ့ဟာသူသွန်းလောင်း; နောက်မှကောင်းကင်ကနေအသက်ရှူသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်, ငါ့ကိုဖန်ဆင်းနေတဲ့ဒုတိယကလေးမွေးဖွားတဲ့လူသစ် " (Donatus မှပေးစာ 4).
ဗတ္တိဇံ၏စက္ကမင်မင်္ဂဓမ်မဟောငျးကမျြးတလျှောက်လုံး prefigured ကြောင်းမှတ်ချက်. ကမ္ဘာဦးကျမ်း 1:2, ကဖန်ဆင်းခြင်းမှာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား, "ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ... ရေသည်၏မျက်နှာကိုကျော်ပြောင်းရွှေ့,"နှင့်မြေကြီးတပြင်စင်ကြယ်သောရှေးဟောင်းရေလွှမ်းမိုးနှစ်ဦးစလုံးခြင်းခံမဥပစာစကားများမှာ. Saint Peter ရေးသားခဲ့သည်အဖြစ်, "နောဧလက်ထက်၌ခုနှစ်တွင်, သေတ္တာတော်အဆောက်အဦး ... အနည်းငယ်အတွင်းမှာ, ကြောင်း, ရှစ်ပုဂ္ဂိုလ်များ, ရေအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခဲ့ကြသည်. ဗတ္တိဇံ, ဤကိုက်ညီသည့်, ယခုသင်ကယ်တင်, မခန္ဓာကိုယ်မှဖုန်တစ်ဖယ်ရှားရေးအဖြစ်ပေမယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသြတ္တပ္ပစိတ်အဘို့ဘုရားသခင့တစ်ခုအယူခံအဖြစ်, "ယေရှုခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကတဆင့် (ပေတရု၏ပထမဦးဆုံးအက္ခရာကိုတွေ့မြင်, 3:20-21; အလေးပေးဆက်ပြောသည်).
ဆီးရီးယားယေဘုယျမန်မှတမန်တော်မြတ်ဧလိရှဲ၏ညွှန်ကြားချက်, အဘယ်သူသည်နူနာများအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းရှာကြံသူ့ကိုမှရောက်လာသော, ခြင်းခံမတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဖို့အချက်များ. "ခုနစ်ကြိမ် သွား. ယော်ဒန်မြစ်ရေချိုး,"ပရောဖကျသူ့ကိုပြောထားသည်, "နှင့်သင်တို့အသားကိုပွနျလညျထူထောငျရကြလိမ့်မည်, နှင့်သင် "စင်ကြယ်လိမ့်မည် (ဓမ္မရာဇဝင်၏ဒုတိယစာအုပ်ကြည့်ရှု 5:10 နှင့်ဝတ်ပြုရာကျမ်း, 14:7). သူကောရိန္သုရန်သူ၏ပထမဦးစွာပေးစာထဲမှာရေးသားခဲ့သည်အဖြစ် (10:2), စိန့်ပေါလ်တော၌ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်လိုက်ပါသွားကြောင်းမီးနှင့်မီးခိုးမိုဃ်းတိမ်၌သူတို့လွန်ရာကနေတဆင့်ပင်လယ်နီ၏ရေထဲမှာဗတ္တိဇံ၏ကိန်းဂဏန်းများကိုမြင်. (သူလည်းကောလောသဲရန်သူ၏ပေးစာထဲမှာဗတ္တိဇံ၏ရှေ့ပြေးအဖြစ်အရေဖျားလှီး၏ဟောငျး-ပဋိညာဉ်ရိုးထုံးတမ်းစဉ်၏ပြောတတ် (2:11-12).